I-KDE inegama lePlasma 5.23 IPlasma 25 yoHlelo lweSikhumbuzo | Ubunlog
I-KDE ibhaptize iPlasma 5.23 i-Plasma 25th Anniversary Edition. Iindaba zale veki
IPablinux | 09/10/2021 11:37 | Ukuhlaziywa ukuba 09/10/2021 17:48 | KDE, Ubuntu
Le projekthi I-KDE iya kuba neminyaka engama-25 ubudala. Andizukuthetha into ngathi bendizazi ukusukela (bendingenayo nekhompyuter yam), kodwa ndingatsho ukuba kunethe kakhulu kule minyaka ingamashumi amabini anesiqingatha. Iminyaka emi-5 eyadlulayo ibingazinzanga kangangokuba uninzi lwethu luthathe isigqibo sokuhlala kwi-MATE okanye kubumbano, kodwa ngoku izinto zisebenza ngcono kwaye uninzi lwethu lukhetha isoftware yeqela le-K.
Kule veki, uNate Graham uqalile Inqaku lakhe malunga neendaba eziza kwi KDE zithetha ngalo mhla, loo nto kunye nePlasma 5.23 iye yabhaptizwa njenge Ushicilelo lwePlasma yama-25. Izakufika neendaba njengomxholo omtsha, nazi ezinye, njengoko beqhubeka besebenzela ukukhutshwa okukhulu okulandelayo.
1 Amanqaku amatsha eza kwi KDE
U-Elisa ngoku ukuvumela ukuba usebenzise ukhetho lwesitayile "esithandwayo / esingathandwayo", apho siphawula iingoma njengezintandokazi endaweni yokubanika inani elithile leenkwenkwezi (uNate Graham, uElisa 21.12).
Ngoku singaskrolela ngevili lempuku okanye iphedi yokuchukumisa ngaphezulu kwembonakalo yekhalenda yePlasma ukutshintsha inyanga ebonisiweyo (iTanbir Jishan, iNkqubo-sikhokelo 5.88).
I-Okular ayisaphazanyiswa xa izama ukubonisa ifayile yeMarkdown equka umfanekiso ongenasicatshulwa se-alt (Albert Astals Cid, Okular 21.08.2).
I-Okular ayisaphazanyiswa xa kuvulwa iPDF ngexabiso lomhla olungalunganga (Albert Astals Cid, Okular 21.08.3).
Xa usebenzisa umsebenzi wecebo lokucoca iDolphin kwinkangeleko yeenkcukacha, iifolda ezingenazo iifayile ezihambelana nesihluzi aziboniswanga (uEduardo Cruz, iDolphin 21.12).
I-KWin ayisaphazanyiswa xa ikhompyutha ivuka kodwa zonke izikrini ziphawulwe njengezikhubazekileyo; endaweni yoko ngoku yenza umboniso wokuqala oqhagamshelekileyo kodwa okhubazekileyo kungoko kukho umboniso omnye onokubonisa izinto. (Xaver Hugl, IPlasma 5.23).
Izicelo zeXWayland azisekho ngamanye amaxesha ziyanyamalala xa kutshintshwa idesktop ebonakalayo (Vlad Zahorodnii, IPlasma 5.23).
Isicatshulwa esikhutshelwe kwiPlasma uqobo (umzekelo, kwicandelo lokhangelo leKRunner) ngoku iyavela kwibhodi eqhotyoshwayo njengoko kulindelwe. Oku kulungisa okokugqibela kweengxaki zebhodi eqhotyoshwayo yeWayland ezazisaziwa yi KDE. (UDavid Redondo, IPlasma 5.23).
Ukuvala usetyenziso ngewindows eyandisiweyo kwaye uyivule kwakhona ngoku kubangela ukuba iwindow yayo ivuleke kwiscreen ngesikhombisi esingaphezulu kwayo, endaweni yokuhlala ivele kwiscreen sasekhohlo (Xaver Hugl, Plasma 5.23).
Indlela emfutshane yeMeta + Q yokutshintsha imisebenzi ngoku ihlala isebenza (Andrey Butirsky, Plasma 5.23).
Ukucofa ekunene kwiimpawu ze-desktop akusabonisi imenyu kwiscreen esingalunganga sokusetwa kwescreen (UDavid Redondo, iPlasma 5.23).
Ukufumanisa akusekho maxa wambi kubonisa uhlobo olungalunganga olufakelweyo kwizicelo zePlppak kunye namaxesha okubaleka ngohlaziyo olukhoyo (Aleix Pol González, Plasma 5.23).
Ukucinezela ukungena emva kokufaka inani kwi-spinbox ukukhetha ubukhulu bepaneli yePlasma ngoku kwenza ukuba utshintsho luqale ukusebenza njengoko kulindelwe (i-Fushan Wen, iPlasma 5.23).
Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo kwi-Alt + O kunye no-Ctrl + Faka / Buyisela ngoku sebenzela ukuvala i-clipboard yento yokuhlela i-windows (Bharadwaj Raju, Plasma 5.23).
Cofa ekunene kwimibala ngoku isebenza kwimbonakalo eyandisiweyo yewijethi yePicker Colour (Bharadwaj Raju, Plasma 5.23).
Ukuqaqanjiswa kwescreen ngoku kubonakala ngokuthembekileyo kwiimeko ezithile (Andrey Butirsky, Plasma 5.23).
Izixhobo zomphathi womsebenzi ezibonisa ulawulo lwe-multimedia akusekho ngamanye amaxesha ukugqobhoza ibar yokuhambisa ezantsi (Fushan Wen, IPlasma 5.23 kunye neeNkqubo-sikhokelo 5.88).
IDolphin kunye nePlasma kunye nezinye iinkqubo azisasebenzi xa ususa ikopi yefayile (Ahmad Samir, Frameworks 5.87).
Ukukopa iifayile ezivela kwiifomathi zeFAT32 ezifomathiweyo akusasileki ngamanye amaxesha kwaye kujinga ngonaphakade (Oliver Freyermuth, Frameworks 5.88).
U "B" welebheli "Yombala ongasemva" kwibhar yewonga yeGwenview ayisanqunyulwanga ngokuyinxenye (uJulius Zint, iiNkqubo-sikhokelo 5.88).
Zonke ii-applet zePlasma kufuneka zibhetyebhetye ngakumbi kwaye zisebenzise ukubonga okungaphantsi kwimemori kuhlaziyo lwamva nje lwekhowudi yokubuyela umva (UNowa Davis, iiNkqubo-sikhokelo 5.88).
Iimpawu zombala kwimvelaphi enemibala kwizicelo ze KDE kufuneka ngoku zenziwe ngobukrelekrele ukuze zingaze zibe nombala ofanayo nemvelaphi (Aleix Pol González, Frameworks 5.88).
IPlasma ngoku igcina naluphi na utshintsho esilenzileyo kwimowudi yokuhlela kwakamsinya nje xa siphuma kuloo ndlela, ke olo tshintsho luya kugcinwa ukuba iPlasma yengozi kamva (Jan Blackquill, Frameworks 5.88).
Umyalezo wemposiso 'kuDoti ugcwele' ngoku ubhalwe amagama angcono kwaye awusaphuphi kwiDolphin (uNate Graham, iiNkqubo-sikhokelo 5.88).
Ifestile yokujonga kuqala kuka-Arca ayisabonisi iqhosha lokuvala elingasafunekiyo emazantsi efestile (u-Eugene Popov, Arca 21.12).
Ukucofa ngasekhohlo i icon kwi-desktop ngelixa ukhetha ii-icon ezininzi ngoku ukhetha ii-icon ezingakhange zicofwe emva kokuvula le icofwe (Bharadwaj Raju, Plasma 5.23).
Kwiseshoni yePlasma Wayland kunye nokuseta kwescreen okuninzi, isikhombisi ngoku siyavela ekungeneni embindini wescreen esikufutshane nokuba sikumbindi wolwakhiwo (Vlad Zahorodnii, IPlasma 5.23).
Iziphumo ekugxilwe kuzo kumaqhosha, imihlaba yokubhaliweyo, iibhokisi zokujonga, amaqhosha erediyo, ii-comboboxes, kunye ne-spinboxes zandisiwe zaba 'yindandatho ekugxilwe kuyo' ekufanele ukuba kube lula ngakumbi ukwahlulahlula ngokujonga nje (uNowa Davis, iPlasma 5.24).
Inkqubo yeeFomathi zoKhetho lweFomathi iphinde yabhalwa kwi-QtQuick, elungisa imiba emininzi enxulumene nomdibaniso womsebenzisi wakudala kwaye ikuqalise kuphononongo olukhulu lokuba ezi ndawo zinikezelwa kwaye zilungelelaniswa njani, ezinokuthi zibandakanye ukudibanisa iilwimi Iphepha kule ukuze inkqubo yokutshintsha inkqubo yolwimi ekugqibeleni ibe lula, icace kwaye ithembeke (uHan Young, iPlasma 5.24).
Umbala wobusuku iphepha loKhetho lweNkqubo ngoku lixhasa umsebenzi we "Gqamisa iiSetingi eziTshintshiweyo" (iBenjamin Port, iPlasma 5.24).
Xa iapplet yeMozulu yongezwa kwipaneli okanye eyakhelweyo yenziwe yasebenza kwiTreyi yenkqubo, i-popup yayo ngoku icela ukuba iqulunqwe, endaweni yokusivumela ukuba sifumanise ukuba oku kuyimfuneko (Bharadwaj Raju, Plasma 5.24).
Iphepha lokuhlaziya likaDisco ngoku linendlela elula, ebonisa kuphela "iipilisi" kwicala lasekunene lezinto eziqhubekayo; Ngaphandle koko, ubungakanani bokubhaliweyo kubonakala kudada kwicala lasekunene lezinto (uNate Graham, iPlasma 5.24).
Izinto ezisisiseko se-UI kwiPlasma ngoku zilandela isimbo esandula ukuthunyelwa kwezicelo ze-KDE, ekwaphucula ukubonakala kwesiphumo sokugxila, ngakumbi kwizilayida kunye neebhokisi zokutshekisha (UNowa Davis, iiNkqubo-sikhokelo 5.87).
Ngokuzenzekelayo, usetyenziso olusekwe kwi-KTextEditor njenge KWrite, Kate, kunye ne KDevelop ngoku zikuvumela ukuba ubambe okubhaliweyo kubakaki okanye kwizibiyeli ngokukhetha isicatshulwa kunye nokuchwetheza uphawu lokuvula lwabazali / isibiyeli / njl. (UJan Blackquill, iiNkqubo-sikhokelo 5.88).
Iiapplet zeSystray ezinoluhlu lwezinto ezinokwandiswa ngoku kulula ukuzisebenzisa kunye nebhodi yezitshixo: ungavula into engagqibekanga ngeqhosha le-Return / Enter, wandise ngesithuba sendawo, uyiwise ngeqhosha lokubaleka, kwaye ubonise imenyu yokuma (ukuba present) usebenzisa isitshixo seMenyu kwikhibhodi yakho, ukuba unayo (Bharadwaj Raju, iiNkqubo-sikhokelo 5.88).
Izinto zeGridi kukhetho lweNkqubo Amaphepha okujonga iigridi ngoku abonisa ngokubonakalayo xa kugxilwe kubhodi yezitshixo (Arjen Hiemstra, Frameworks 5.88).
"Ushicilelo lwePlasma 25th Annivers Edition" (5.23) iyeza nge-14 ka-Okthobha. I-KDE Gear 21.08.3 iya kukhutshwa ngo-Novemba 11, kunye ne-KDE Gear 21.12 ngo-Disemba 9. Izakhelo ze-KDE 5.87 ziya kukhutshwa namhlanje nge-Okthobha 9, kunye ne-5.88 ngo-Novemba 13. IPlasma 5.24 ayisenamhla ucwangcisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE ibhaptize iPlasma 5.23 i-Plasma 25th Anniversary Edition. Iindaba zale veki
Ngokucacileyo "iPlasma 25th Anniversary Edition" (5.23) ilibazisekile kude kube ngu-Okthobha u-14, ukuyenza ihambelane nomhla wesikhumbuzo sama-25th (umthombo: https://community.kde.org/Schedules/Plasma_5#Future_releases )
I-KDE Gear 21.12 sele inemihla, ungayibona kwi https://community.kde.org/Schedules/KDE_Gear_21.12_Schedule
(imvelaphi: https://tsdgeos.blogspot.com/2021/10/kde-gear-2112-releases-schedule.html )
Andazi ukuba kutheni bengakhange bahlaziye iphepha apho bendihlala ndiyijonga ngolwazi oluvela kwi KDE Gear.
UAdilson Antonio de Oliveira sitsho
Ibeqhuba kakuhle kakhulu.I-Bem itya loo atualizei yohlelo lwesikhumbuzo seminyaka engama-25 kwaye kde nao entou mais… alguma ssolução?
Phendula uAdilson Antonio de Oliveira
I-SmartGit, ujongano lomsebenzisi lokusebenza neGit ukusuka ku-Ubuntu